Masoivoho britanika Timothy Smart : Nankasitraka ny asa vitany ny Filoham-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaMasoivoho britanika Timothy Smart : Nankasitraka ny asa vitany ny Filoham-pirenena
Loharano nahitana ny fahombiazana teo amin’ny fiaraha-miasa sy fifandraisan’i Madagasikara sy Angletera, indrindra anisan’ny fahombiazan’ny dian’ny Filoham-pirenena farany teo tany Angletera ny masoivoho Britanika Timothy Smart, ary indrindra ny tolo-tanana izay noentin’ ny fanjakana britanika teo amin’ny lafiny ara-toe-karena sy sosialy. Marihina moa fa tapitra ny fotoam-piasian’ity masoivoho anglisy ity eto Madagasikara, izay naharitra dimy taona, nankasitraka azy feno ihany koa ny Filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina ny sabotsy lasa teo, izay fotoana nanaovana veloma ny tompon’andraikitra voalohany ny diplaomasia eto Madagasikara. Ny taona 2012 no nandraisan’ity masoivoho britanika, izay nonina sy niasa teto amintsika ity ny asany teto Madagasikara, maro ihany koa ny asa vitany teo amin’ny fampifandraisany ny firenena roa tonta. Anisan’ny nisongadina amin’izany ohatra ny lafin’ny fampanjakana hatrany ny demokrasia teto Madagasikara tamin’ny fotoana nisian’ny krizy politika. Nandritra izay dimy taona izay ihany koa , dia nandray anjara feno amin’ny fampivoarana ny lafin’ny sosialy sy toe- karena , fahasalamana sy fanjarian-tsakafo, ary tsy hohadinoina ny lafin’ny fiarovana ny tontolon’ny zava-manan’aina izay ahiana ho lany tamingana.
Ankehitriny dia anisan’ny asa izay mbola tohizan’ny masoivoho britanika eto amintsika ny mahakasika ny ady atao amin’ny valanaretina pesta, izay ahitana manam-pahaizana avy amin’ity firenena Britanika ity izay efa tonga eto Madagasikara. Ankoatra izany ihany koa dia vavolombolena eo amin’ny fanelanelanana maro teo amin’ny fifanakalozana maro teo amin’ny firenena roa tonta i Timothy Smart, na teo amin’ny lafiny ara-barotra izany , na fifanakalozana ara-kolotsaina sy tontolo iainana. Nambaran’ity masoivoho britanika, izay nahavita ny asa nampiandraiketina azy ity àry fa “ anisan’ny nahafaly ahy sy nanamarika ny fotoam-piasako teto Madagasikara ny fitsidihan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany Grande Bretagne, toraka izany ihany koa ny fitsidihana, izay nataon’ny printsy vavy Anne teto Madagasikara. Noho izany , dia faly sy ravo tokoa aho tamin’ny fanatanterahana ny adidiko teto Antananarivo , tamin’ny fankalazana ny faha- 200 taonan’ny fifanarahana natao teo amin’ny firenena roa tonta, dia I Madagasikara sy Angletera izany. Mino aho fa ho tsaratsara kokoa sy hihamafy hatrany ny fifandraisan’ny firenena roa tonta amin’ny roan-jato taona ho avy indray” hoy hatrany ny nambaran’ ity masoivoho anglisy ity. Nambarany hatrany anefa fa ny volana novambra ho avy eo, dia efa ho tonga eto Madagasikara ny olona izay handimby azy..
Notoloran’ny minisiteran’ ny Raharam-bahiny mari-boninahitra
Samy naira-nanaiky ny rehetra teo amin’ny fiaraha-miasan’i Madagasikara sy Angletera, fa maro ireo zava-bita, indrindra noho ny asa izay niarahan’ny roa tonta noketrehina sy tontosa. Manoloana izany indrindra no nanoloran’ny fanjakana malagasy ny mari-boninahitra ‘’commandeur de l’ordre national” tamin’ny alalan’ny minisitry ny Raharaham-bahiny Henry Rabary-Njaka ny sabotsy lasa teo. Lanonana manetriketrika tokoa no nitranga tetsy amin’ny minisiteran’ ny Raharaham-bahiny nandritra ity lanonana ity , satria dia tonga nanotrona izany ny fianakavian’i Timothy Smart. Amin’ny fanomezana mari-boninahitra tahaka izao moa, dia nomen’ ny filoham-pirenena andraikitra feno ny minisitra tompon’andraikitra dia Henry Rabary-Njaka izany, izay nampisalotra ny mari-boninahitra. Anisan’ny fahombiazana eo amin’ny fifanakalozana eo amin’ny firenena vahiny sy ny firenena malagasy moa ny fifampitokisana misy eo amin’ny masoivoho vahiny sy ny minisiteran’ ny Raharaham-bahiny, izay mpifandray sy mpiara-miasa mivantana amin’ny fifandraisana.